‘धुर्मुस–सुन्तली’को ‘सेन्टी भाइरस’ घोषणा, काे काे छन् कलाकार ? - TajaNp News
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/‘धुर्मुस–सुन्तली’को ‘सेन्टी भाइरस’ घोषणा, काे काे छन् कलाकार ?
पाेखरा २२ साउन- नेपाली हाँस्य कलाकार जोडी सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेले चलचित्र बनाउने चर्चा चलेको लामै समय भएपनि यसको घोषणा हुन सकेको थिएन । अब, यो जोडीले चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेको छ । रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्ने चलचित्रको नाम ‘सेन्टी भाइरस’ राखिएको छ । चलचित्र बजारमा ‘एन्टी भाइरसदेखि छल कपट’सम्म निकै चर्चामा थियो ।
यो चलचित्रमा सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, दयाहाङ राई, विल्सन विक्रम राई, वुद्दि तामाङ, कमलमणी नेपाल, राजाराम पौडेल, सुर्यमाला खनाल, बसन्त भट्ट र दीपक आचार्यको मुख्य भूमिकामा छन् ।
चलचित्रमा राजनराज सिवाकोटी र कालीप्रसाद बाँस्कोटाको संगीत, शैलेन्द्र डी कार्कीको छायांकन, निमेष श्रेष्ठको सम्पादन, कुमार कट्टेल र दीपक आचार्यको लेखन रहेको छ । चलचित्रमा डिन्डु लामा निर्माताको रुपमा छन् भने फूर्पा लामा सह–निर्माताको रुपमा छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै कलाकार तथा प्रस्तुतकर्ता सितारामले भने–‘गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम अगाडि बढिरहेको छ । डीपीआर दशैंसम्म सकिन्छ होला । यो भन्दा अगाडि नै हामी चलचित्रको छायांकन सक्नेछौ ।’ उनले लामो समयपछि फेरि आफूहरुले पर्दामा पाइला राख्न लागेको बताए ।
यस्तै, कलाकार कुञ्जना घिमिरेले भनिन्–‘चलचित्रको नाम सेन्टी भाइरस भएपनि हामी भने रमाइलो भाइरस हौं ।’ सुबिहानी फिल्मस् प्रा.लिको ब्यानरमा यो फिल्म बन्नेछ ।
गलबन्दीले कमायो २ करोड…
“प्रेम गीत ३” मा अनुभव रेग्मीको नयॉ जोडीको रुपमा समृद्दी..
गलबन्दी हिट भएको केहि समय बित्न नपाउदै अन्जलीले खेलेको अर्को गीत भाइरल !छोटो समयमै एति धेरैको माया
प्रकाश सपुतले फुकाए बेदनाको पोको: युरोपमा पनि छुवाछुत भोगेँ
दिलिपकी छोरी यस्ती हट छिन, ‘लक्का जवान’ मा होलिन त पक्का ( तस्विर सहित )